UJohn Chow: I-Blogomentor | Martech Zone
UJohn Chow: I-Blogomentor
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 22, i-2006 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Nginguye fan of UJohn Chow Dot Com, Okuxubile okuxubile kweDot Com Mogul. Ku-blogosphere, kukhona uchungechunge lokudla uma uthanda, lwama-blogger. Ngingahlukanisa uJohn Chow njengomunye walabo abaphezulu kochungechunge lokudla. UJohn wasungula iThe TechZone ngo-1999 kanti okunye kwakuwumlando. UJohn unegunya ngenxa yomlando wakhe we-intanethi, ama-rambling akhe ajabulisayo, nolwazi lwakhe lobuchwepheshe. Ibhulogi yakhe ileyo engibheka kuyona ngoba uJohn ubonakala ngokusobala futhi uyimfihlo kubhulogi yakhe.
NguJohane Ukwabelana igunya lakhe kuwebhu ngokukhuluma ngalabo ababhala okuthunyelwe kubukeza ibhulogi yakhe. Yingakho ngemuva kwami ​​ngibhala ngaye lapha.
Ibhulogi kaJohn nayo yenza kahle ngendlela yokwenza imali - isizathu esiyinhloko sokuthi kungani ngigcina umkhondo wokudla kwakhe. Uma uzibuza ukuthi ungayenza kanjani imali ngebhulogi yakho, kungahle kube okungcono kakhulu ukuqala ngakho. UJohn usezame kancane ngokwakhiwa kwebhulogi, indawo yezikhangiso, imithombo yezokukhangisa, njll. Futhi ngomusa ubika kukho konke lokho. Ingxenye enhle yemali yakhe yokukhangisa nayo iya ngqo esizeni esiza abantulayo… lokho kuhle kakhulu. Kamuva nje, uJohn wenza ngisho nokukhangisa okuqondile kusayithi lakhe kunokuba enze okuvela eceleni. Ngibheke phambili ekufundeni kabanzi mayelana nokuthi kuhamba kanjani.
Uma ufuna ukuthola ukunambitheka okucacile kukaJohn, amahlaya akhe, nokuqukethwe kusayithi lakhe, ngingabheka okulandelayo:
Ngubani uJohn Chow (hhayi sina)
Ngubani uJohn Chow (ongathí sina kakhulu)
Okunye okuthunyelwe kwakamuva ku-Technology
UJohn ubonakala engesabi, kepha engazikhukhumezi. Ukwethembeka okuphansi komhlaba kuyahlonishwa. Angikaze ngibone neposi elilodwa lapho asizakala khona 'ngepulpiti' lakhe futhi walisebenzisa ukushaya noma ngubani. Esikhundleni salokho, kuyabheda futhi ikakhulukazi kuyahlekisa. Ngicabanga ukuthi uJohn mhlawumbe uwuhlobo lomuntu ongathanda ukuba nobhiya naye. Ngimeme ukuthi ngiyithenge ngesikhathi esizayo lapho ngiseVancouver.
Ngiye esikoleni samabanga aphakeme eVancouver ngakho-ke ngiyakujabulela ukufunda okuthunyelwe kwakhe mayelana nokuba ngaphakathi nangaseduze kwelinye lamadolobha engiwathandayo emhlabeni. Ngakho-ke unayo - ukubuyekeza kwami ​​kwe- UJohn Chow Dot Com, Okuxubile okuxubile kweDot Com Mogul. Hat kuwe John ... omunye wama-blogomentors wami!
UJohn ubuye abe yingubo eyodwa yokugqoka kanye nokudansa…. chofoza lapha ukumbona esebenza.
Ibhalwe yiziwula ukuthi ifundwe imbeciles…
Ama-Amazon Associates: Ngabe ukhona owenza imali?